July 2021 – Kalfadhi
July 22, 2021 Hassan Istiila0 comment
Xildhibaannada baarlamaanka Puntland oo maanta ka soo laabanaya fasaxa Ciida, ayaa lagu wadaa in inuu magacaabo guddiga qabanaya doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka. Baarlamaanka ayaa maanta yeelanaya fadhiga 16aad ee kalfadhiga 48aad, kaas oo ajandihiisa uu yahay magacaabida guddi ka kooban 9 xildhibaan oo qaabilsan qabashada doorashada xubnaha Aqalka Sare. Dhinaca kale madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa maanta la filayaa inuu dib ugu laabto Garowe, kaddib safaro uu ku tagay Imaaraadka Carabta iyo Kenya. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
July 19, 2021 Hassan Istiila0 comment
Golaha Midowga Musharaxiinta oo xalay shir ugu soo dhammaaday magaalada Muqidishu, ayaa walaac xooggan ka muujiyay in doorasho xor iyo xalaal ah ay ku qabsoonto waqtigii loo asteeyay. Golaha oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in ay wali taaganyihiin shan caqabad oo dib-u-dhigi kara doorashadda, iyagoona ku sababeeyay walaaca ay ka qabaan doorashada arrimo ay ka mid yihiin; -kala qeybsanaanta ka jirta guddiyada gobolada Waqooyi ee labada garab ah. -Xaalada gobolka Gedo oo ay ku tilmaameen inaan weli heshiis laga gaarin. -Caqabadaha amni ee ka taagan gobolka Hiiraan. -Dhaqaalihii doorashada…